माता, डाटा माईनिङ र स्युडोसाईन्स – ✍️ शब्द संसार
July 25, 2017 Non-Fiction
Introduction ( माता परिचय )
माता: भुत र भविष्यको सचित्र विश्लेषण गर्नसक्ने र भविष्यमा आउने दुर्घटनाहरुलाई (यदि उहाँलाई प्रशस्त दान गरेको खण्डमा) चाडवाडजस्तो बनाईदिने, अनगिन्ती दैवी–क्षमताले भरिएको, आफुलाई सकेसम्म भगवाननै भन्दिने व्यक्तित्वलाई नेपालमा, नेपालीमा “माता” भनिन्छ (संस्क्रितमा, हिन्दिमा पनि यही भनिन्छ होला) । पुरुष भएको खण्डमा उहाँको वैज्ञानिक नाम स्वत: “धामी“, “बनझाँक्री” या अरु यस्तै केही हुनेछ ।
माता = धामी = बनझाँक्री ………(१ )
यहाँ उप्रान्त, समिकरण –१ लाई आधारमान्दै, ति ३ शब्दमध्ये आफ्नो सहजता हेरेर (युनिकोडमा) यस अलेखकले कुनै एक शब्द प्रयोग गर्नेछ। लैङ्गिक विवाद नगर्नुहोला। (यस औपचारिक अनुरोध पश्चातपनि भोली विवाद गर्नुहुन्छ भने उक्त विवादलाई यसै वाक्य मार्फत आजै अमान्य घोषणा गरिन्छ ।)
Area of Expertise ( माताको बिज्ञता )
माता हुनलाई कुनै औपचारिक शिक्षाको जरुरत पर्दैन (जन्म दिने माताको कुरो हैन है :पी ) तथापी छ भने त के फरक पर्ला र ! तर आजसम्म कुनै शिक्षित व्यक्तित्व माता बनेर बसेको सुनेको छैन बरु Thesis कटेन भन्दै थुप्रै PhD गर्दै गरेका विद्यार्थीहरु, अशिक्षित मातासामुन्ने लाईन लागेनन होला भन्न सकिन्न ।
माताहरु हात हेरेर भबिस्य भन्न सक्छन । आजकाल अद्रिश्य भएर आवाजमात्र दिने माताहरु पनि बजारमा छरपष्ट छन । (माईक मार्फत, दरबारको भित्र कोठामा, लुकेर । ) कोही–कोही चामलका गेडा पनि हेर्छन रे । जे होस्, उनिहरु भबिश्यको सुईँको पाउँछ्न । भोली तपाईं कुन दिशा फर्केर हिड्दा ठेस लाग्दैन, भन्दिन्छन । आफ्नो व्यवसायमा कुन बार, कती लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, भन्दिन्छन । ब्रिटिश लाहुरे हुन हाईट चहियो? बढाईदिन्छन । छोरा–छोरी बिग्रे कि? सपार्दिन्छन । रोग–व्याधिले सतायो, आफु–जत्रै लोकल कुखुरो चढाउनुस्, निको पार्दिन्छन ।( ब्रोईलरले हुँदै–हुन्न । मीठो पनि त हुनुपर्छ नि । ) भुत–प्रेत ले सतायो? पन्छाईदिन्छन । सन्तान भएनन? प्रशस्त दान गर्नुस, हुन्छन ।
विज्ञान र प्रविधिले राम्ररी जरो गाडीसकेको यो अत्याधुनिक युगमा पनि यस्तो रुढिवादी र अन्धविश्वासमा रुमल्लिनुले के को संकेत गर्ला ? ठाडो तरिकाले भन्दा, के यस्ता परम्परागत अभ्यासले हाम्रो सभ्यताको सुचांकमाथिनै प्रश्न गर्दैन र ?
भन्नुहोला, तेर्सो तरिकाले पो ठीक होला कि? तर माफ गर्नुस हजुर, जताबाट हेरेपनी, जतिनै केलाएपनी, यो आफैँमा वहियात छैन र ? या भनौँ आधारहिन छैन र ? फेरी तपाईं जान्ने भएर सोचिरहनु भ‘को होला : “सब चिजको आधार कहाँ हुन्छ यार ? (यस्तो बेलामा नेपाली पाठकहरु बढ्तै रमाईला भईदिन्छन, सरी, भईदिनुहुन्छ र “यार” जस्तो भाईचारा प्रष्ट्याउने शब्दहरु मनमनै प्रयोगमा ल्याइदिनुहुन्छ । )संसारमा कत्रा कत्रा रहस्यहरु छन । यो केटो बढ्ता लेख्दो रै‘छ ।”
झुक्केर पढ्दै हुनुहुन्छ, केही समय धैर्य गर्नुस मतलब पुरै पढ्दिनुस्….! (मलाई थाहा छ, हजुर कम्ती धैर्यवान हुनुहुन्छ ।)
मैले उत्तर दिने जमर्को पनि गरेको छु ।
गन्थन–मन्थन बिचमा गर्दै–गरौँला । पुन: बिषयबस्तुतिर जाउं है त ।
यो भिडियो हेर्नुभो ? AP1 HD TV (NEPAL IDOL दिने टि.भी क्या ) बाट “System Check” कार्यक्रममार्फत प्रसारित: “बजारमा अदृष्य शक्ति, धामी–झाक्री एवम झार फुकको नाममा भई राखेको ठगी धन्दाको पर्दाफास“
एकचोटी हेर्नुस त ।
भिडियो नहेर्ने? हेरिसक्नुभ‘को हो कि? अथवा सिधै अगाडि बढ्ने …? हस ।
पढ्नेमान्छे हुन्हुन्छ जस्तो छ, या भनौ आज पढौँ न त सोच्नुभा रै‘छ । ठीक हो । अब मैले बेठीक हो भने नि तपाईँ जस्तो विद्दानले नपढी कहाँ छोड्नुहोला र? (“कुरो” भद्रगोलको बले स्टाईलमा ।)
सर्वप्रथम: धार्मिक आस्थामाथि व्यापार गर्ने, ति झुठा भगवानसँग कत्ती पनि नडराई रिपोर्ट संकलन गर्ने र प्रसारण गर्ने टिमलाई साधुवाद ।
(पुरै त पढ्नुस, तपाईंलाईनि धन्यवाद दि–हाल्छु नि यार ।)
प्रसङ्ग बदलौँ । धेरै नै जान्ने भनेर, नाम कमाएका कुख्याँत माताहरुले भनेका अनगिन्ती कुराहरु केही मानिसहरुमा मिलेको छ रे ? अथवा भनौँ मिलेको पाईन्छ । यो कसरी सम्भव हुनसक्छ? सोच्नुभ‘को छ ?
( छैन किनकी तपाईं सधैं आफ्नै बारेमा मात्र सोच्नुहुन्छ । )
के अशिक्षानै जड–तत्व हो त? सायद होईन । हामी दैवी शक्तीमा अत्यधिक विश्वास गर्दिन्छौ । यसो भनौं : हाम्रो संस्कारमा यो कुरिती नराम्ररी गडेर बसेको छ । शिक्षित मानिस पनि माताको शरणमा पर्छन नै । किन होला त ?
(बडो गम्भिर बन्नुभो त ? छोड्दिनुस् हजुर, के गर्न सकिन्छ र ?)
भाग्य हेर्ने आफ्नो अनुभव संगै प्रत्येक माताहरुले एक किसिमको अनौठो ज्ञान हाँसिल गरेका छन । यो कता कता Data Mining सँग मिल्न जान्छ । पर्खनुस्, हामी बडो सुन्दर बिश्लेषण तिर जाँदैछौं ।
Data Mining (सुचना उत्खनन र भविश्यवाणी)
कुनै पनि बिषयको प्रशस्त Data जम्मा गरेपछी त्यसमा लुकेर बसेको Pattern पत्ता लगाउने कार्य Data Mining हो । त्यो Pattern को अध्ययनपश्चात भोली के होला भनेर केही हदसम्म आजै भबिष्यवाणी गर्न सकिन्छ ।
मौसमको भविष्यवाणी, हामीले देखे–सुनेकै छौँ । पुराना वितेका दिनहरुको जानकारी जम्मा गरेपछी, कुन तरिकाले मौसममा फेरबदल भईरहेको छ भनेर पत्ता लगाइन्छ अनी भोली परिवर्तन हुनसक्ने आशंका गरिन्छ । मिल्न पनी सक्छ र नमिल्न पनि ।
Google ले हामीलाई के मनपर्छ? के पढ्न चाहन्छौं? सजिलै पत्ता लगाउंछ । YouTube Login गरेपछी तपाईं हाम्रो रात बित्छ । हाम्लाई के हेर्ने मन छ, त्यो आँफैँ छेउमा आउँदैन र?
Mobile मा Google Chrome खोल्नुस त? सबै तपाईंलाई पढौं–पढौ लाग्ने link छैनन र ? (Articles for you भन्ने ठाउँँमा)
यस्ता उदाहरण त अनेकौँ छन । यिनिहरुमा वैज्ञानिक तवरले Data Mining को प्रयोग भएको छ ।
समयको दौरानसंगै माताहरु पनि आफ्नै हिसाबले Data Mining मा पोख्त हुँदैछन ।
अनुभवहिन माताहरु अलिक शिष्ट देखिन्छन । व्यवहारिक हुन्छन । आर्थिक हिसाबले पनि जबरजस्ती गर्दैनन । अझ गाउँघरमा त, अधिकांश प्रौढ र बुढा–बुढीहरुको कुरा सुन्दिने भनेकै माताहरु हुन्छ्न । सुन्दर सुदुर भबिष्यको लागि उनिहरु मातासंग खुलेर प्रस्तुत हुन्छन । बिस्तारै माताले प्रसस्त Data कलेक्ट गर्दै जान्छिन । र पाएको Data आफ्नै हिसाबले बर्गीकरण गर्छिन र आफ्नै घरेलु Database मा राख्छिन ।
अनी दिनप्रतिदिन अनेकौं ग्राहकहरु थपिदैँ जान्छ्न । बिस्तारै एउटा Pattern निकाल्छिन र एक कुख्याँत माता बन्छिन । लाखौंँ लुट्छिन । गगनचुम्बी दरबार बनाउँछिन । आफुलाई भगवान भन्छिन । हामी Degree सिरानीमा राखेर, तिनको वरीपरी लड्डु चढाउंछौ र सुनौलो भविष्यको अपेक्षा गर्छौं ।
(हल्का रिस उठेको अवस्था)
यो त माताको व्यापार गर्ने तरिकामाथिको सुक्ष्म अध्ययन भयो । उनको पुरातन बिज्ञान अर्थात ज्योतिष बिद्याबारे(जसको प्रशस्त ज्ञान भएको खण्डमा उनिहरु आफ्नो पेसामा अझ सबल मानिन्छन) छलफल अझै बाँकी छ ।
Pseudoscience (पुरातन बिज्ञान )
मुलत: Pseudoscienceभनेको, वैज्ञानिक आधारबिना नै हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसेको मुल्य, मान्यता र विश्वासहरु हुन । प्रमाण छैनन भन्दैमा सबै हाम्रा मान्यताहरु गलत पनि छैनन तर परोक्ष रुपमा, जसले सभ्यतासंगै हामीले सिकेका सिद्दान्तहरुमाथी नै धावा बोल्न खोज्छ र साह्रै ईलोजिकल छन भने, मान्नैपर्छ र ?
पक्कै पर्दैन नि ।
(अलेखक, पाठकसंग कुरो मिलेको अपेक्षा गर्दछ ।)
Astrology पनि Pseudoscience हो ।
अन्तरिक्षमा रहेका ग्रह, उपग्रह लगायतका ठूला–ठूला पिण्डहरुको सापेक्षिक गति र अवस्थाले मानिसको भविष्यमा असर पार्दछ भन्ने Astrology को आधारनै गलत भएको आधुनिक भौतिकशास्त्रले प्रमाणीत गरिसकेको छ ।
थप अध्ययन गर्नुहुन्छ ? (गरे गर्नुस् नगरे नगर्नुस् । यो तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत कुरो हो ।)
रहस्य आफ्नो ठाउँँमा छन, माताहरु आफ्नो । संसार रहस्यमय छ भनेर बेकारमा के फिलोसोफिकल कुरो गर्नु?
बग्रेल्ती प्रश्नहरु अनुत्तरित छन । माता त न प्रश्न हुन न उत्तर ।
यतिन्जेल यो अलेखकलाई झेल्दिनुभो । मुरिमुरी धन्यवाद ।
Reference: Standford Encyclopedia of Philosophy
Astrologysamasamayikअलेखकउत्तरडाटा माईनिङप्रश्नभविश्यवाणीमातारहस्यसुचना उत्खननस्युडोसाईन्स